Tsy azon'ireo endri-javatra manjavozavo Google Wave | Martech Zone
Tsy azon'ireo endri-javatra goavan'ny Google Wave
Alakamisy Janoary 7, 2010 Alakamisy, Jona 18, 2015 Adam Small
Foana aho mampiasa Google Wave izao mandritra ny volana maromaro. Raha vao nahare momba ny Wave aho dia nieritreritra fa toa mahaliana ilay izy. Nojereko ny horonan-tsary lava be momba ilay fitaovana ary tototry ny hery sy ny mety ho fisian'ny revolisiona miandry amin'ny serasera an-tserasera.
Rehefa avy nangataka fanasana aho ary nahazo fidirana farany tamin'ny serivisy dia nanomboka naka tsimoramora ireo fifandraisana amin'ireo namana sy mpiara-miasa hafa izay afaka niditra ihany koa aho Google Wave. Ho an'ny fitaovam-pifandraisana dia tsy dia mahasoa loatra izany raha tsy afaka miresaka amin'ireo olona ifaneraseranao matetika isan'andro ianao.
Google Wave mampanantena ny hanome fotoana hikarakarana hetsika, fizarana fifandraisana sy antontan-taratasy zaraina mitovy. Azonao atao ny mizara sary, hevitra, horonan-tsary, naoty, antontan-taratasy, ary na dia ny lalao rehetra aza amin'ny sehatra iray ihany ao anatin'ny varavarankely misy anao.
Ny zava-misy dia mbola tsy mbola niainako ny tena revolisiona amin'ny fifandraisana ho ahy. Ny fampiasana lava indrindra hitako avy Google Wave dia ny fiaraha-miasa nataoko tamin'ny namako iray izay manoratra ho an'ny iray amin'ireo bilaogiko. Izahay dia mizara tanjona, hevitra, fanontaniana ary paikady amin'izy samy izy ao amin'ny Wave ary mety tsara izany.
Mbola miandry aho fa hiainga tena izy na izany aza. Heveriko fa ny fomba ahafahan'izy ireo mampiditra ny fampiasana amin'ny overdrive dia ny hanolo ny efa misy Gmail functionality with Google Wave. Oh, ary raha mbola eo izy ireo, ampidiro fotsiny Google Tahirin-kevitra sy Google Miresaka ao ihany koa. Angamba na hafafin'ny vondrona google hitondra ihany koa.
Mbola mieritreritra aho Google Wave hanova ny fifandraisana an-tserasera. Heveriko fa tsy hitranga izany raha tsy hoe ny mpanjifa midadasika kokoa aza afaka miditra amin'ny lampihazo sy ny hafa Google ampidirina na esorina ny serivisy.
Tags: google onjaGoogle +
Ahoana ny famindrana ny bilaoginao ary hitazomana ny fotoana fitadiavana
Tsy ny matihanina SEO rehetra no foronina mitovy
Jan 7, 2010 ao amin'ny 11: 47 AM
Jason, nofintininao tao anatin'ny fehintsoratra fohy vitsivitsy, izay tena tsapako momba ny Google Wave. Tena naniry aho hanova tanteraka ny fomba fiasako, saingy navela hahatsiaro tena ho kivy aho.
Janoary 7, 2010 amin'ny 8:09 PM
Jason, lahatsoratra mahafinaritra! Efa ela no nampiharihary ny mpanatrika eto amin'ny teknolojia tena izy sy ny fampiasan'ny bilaogera ny Wave. Misaotra!
Janoary 7, 2010 amin'ny 9:59 PM
Jason, tsy afaka nanaiky bebe kokoa aho.